Ho sarotra ny fandaminana | NewsMada
Ho sarotra ny fandaminana
Ampy handraisana ireo mpivarotra ny toerana any anatin’ny tsena Pochard na Petite Vitesse sy ny tsena isan’andro, toy ny any Mahamasina sy Andravoahangy, ary misy ny lamina efa napetraka amin’izany. Raha nizotra tsara ny fanesorana ny mpivarotra ny fiandohan’ny herinandro teo, tsy nanaiky kosa ny ampahany omaly.
Ho an’ny boriborintany I, 300 ny mpivarotra amoron-dalana nisoratra anarana nanaiky ny fandaminana. Rehefa tonga anefa ny fotoana hakana ny karatra maha mpivarotra matihanina, 80 monja no naka ny karatra. Ny ambiny izany, niverina eny amoron-dalana indray.
Ny zavatra hita eny Analakely sy ny manodidina, manao fangala-piery ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan’ny kaominina isan’andro. Raha tsy hentitra ny mpitantana ny tanàna, ho sarotra ny hanaisotra tanteraka azy ireo. Ny mpivarotra rahateo, efa zatra ny gaboraraka nandritra ny taona maro.